Ole Gunnar Solskjaer oo ka warbixiyay xiddigaha ka maqanaan doono kulanka Norwich City – Gool FM
(Manchester) 10 Jan 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa wuxuu shaaca ka qaaday xiddiga ka maqnaan doono kulanka barri ee Norwich City.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer iyo wiilashiisa Manchester United ayaa waxay barri ku soo dhaweyn doonaan garoonka Old Trafford kooxda Norwich City si ay u wada ciyaaraan ciyaar ka tirsan kulamada 22-aad ee horyaalka Premier League.
Macalinka reer Norway ayaa sheegay in Jesse Lingard uu ka maqnaan doono kooxda Manchester United kulanka barri ay la ciyaari doonaan Norwich City, sidoo kale waxaa iyaguna maqnaan doona xiddigaha Eric Bailly iyo Fosu-Mensahwaxay.
Haddaba tababare Solskjaer ayaa wareysi uu bixiyay kahor ciyaarta barri ee Norwich City wuxuu shaaca ka qaaday xiddiga ka maqnaan doono wuxuuna yiri:
“Jesse Lingard wuu xanuunsan yahay mana ku jiri doono liiska kooxda”.
“Xiddigaha Eric Bailly iyo Fosu-Mensahwaxay la ciyaari doonaan kooxda da’ayarta ah Maanta, waana arrin aad u wanaagsan, waxay sugayeen waqti dheer inay soo laabtaan waana ku faraxsanahay iyaga”.